Sahlanganyela embonini yezingilazi yezokwakha kusukela ngo-2006
Ukusekelwa Kwe-imeyili info@yongyuglass.com
Shayela Ukusekela 0086-400-089-8280
Ingilazi yephrofayili ye-LABER® U
Uhlelo olusezingeni eliphezulu lwengilazi ye-U
Uhlelo lwamandla lwengilazi yensimbi ephansi engu-U
Ingilazi yethayela / Elithambile / Eliphansi le-U
Ingilazi yomugqa we-Facade / Curtain
Ingilazi yezokuphepha yeJumbo / ngokweqile
I-Dupont SGP ingilazi ebunjiwe
Ingilazi evikelekile yokuphepha
Ingilazi efudumele nengilazi Engilisiwe
Amayunithi engilazi aphansi we-Low-E
Izitimela zezingilazi zokuphepha & uthango
Uhlelo lwezingilazi ze-Ice rink
Izitimela zezingilazi zokuphepha / uthango lwegilasi echibini
Ukuhlukaniswa kwengilazi yezokuphepha
Ingilazi yokuphepha yegumbi
Ingilazi ye-Smart / ingilazi yePDLC
Ingilazi eshisayo / ephansi yensimbi
Ingilazi efrathekile / efuthelwe ngesithando
I-LABER® U Glass yeProfayili
Ezokuphepha Glass Ezokuphepha & Ezicijile
I-facade / Curtain Wall Glass
Ingilazi Yezokuphepha yeJumbo / Oversised
Isistimu Engilazi Ye-Performance Ye-Glass / U Enkulu ye-Performance High
Iphrofayili Ye-Glass Ye-Iron U / ye-Iron U yaphansi
Ezokuphepha Glass Railings / Glass Pool Fence
Imininingwane eyisisekelo Gcina ukubuka kusuka edeskini yakho nakwichibi kucacile futhi kungaphazanyiswa ngohlelo lweLazi le-Glass. Izingilazi ezigcwele zamapulangwe wesitimela / uthango lwamachibi ukuze kufinyeleleke ngengilazi ye-balusters, ngaphakathi noma ngaphandle, ukufakwa kohlelo lokujikisa ingilazi emgodleni kuyindlela eqinisekile yokuthola ukunakwa futhi ulethe nemibono yakho yokubiyela / yokufaka uthango. Izici 1) Izitimela zegilasi eziphakeme ze-Aesthetic Zokukhalaza Eziphakeme zinikeza ukubukeka kwesimanje futhi noma yiluphi olunye uhlelo lwe-deck railing olusetshenzisiwe namuhla. Kwabantu abaningi, i-handrails yengilazi yesitayela i-consi ...
Ingilazi yethayela le-Ceramic Frit & Frosted-Low-E U / Glass
Ingilazi yephrofayili ye-U imininingwane eyisisekelo ingilazi enemibala eyehlisela kokubili okubonakalayo nokwedlulisela ukukhanya. Ingilazi ebunjiwe cishe njalo idinga ukwelashwa okushisa ukunciphisa ingcindezi enamandla yokushisa kanye nokwephuka futhi ivame ukukhipha ukushisa okungaphakathi. Imikhiqizo yethu yengilazi ye-U tified yengilazi yeza ngemibala ehlukahlukene futhi ihlelwe ngokudluliswa kokukhanya. Kunconywa ukuthi u-ode amasampula wangempela wengilazi wokumelwa kombala weqiniso. Amafreyimu we-ceramic we-ceramic axoshwa ku-650 degrees Celsius kwi-b ...
Ulwazi oluyisisekelo Ingilazi enamamitha yenziwa njenge isamishi lamashidi ama-2 noma ingilazi egcwele ukuntanta, phakathi kwayo enamathele ndawonye nesigaqa esinzima nesishisayo se-polyvinyl butyral (PVB) ngaphansi kokushisa nokucindezelwa bese kukhipha umoya, bese siyibeka phezulu -pressure Steam kettle isebenzisa amandla okushisa aphezulu kanye nengcindezi enkulu yokuncibilikisa inani elincane lomoya kufakwe Ukucaciswa Flat lamoned ingilazi iMax. usayizi: 3000mm × 1300mm Ingilazi engagobile eyenziwe ibunjiwe
I-Shower Igumbi Lokuphepha Ingilazi
Imininingwane eyisisekelo Ingilazi yokugeza eshisayo ye-Smart: Ukulawula ubumfihlo bakho kube lula Kusukela manje, konke okudingayo kungukushintshwa kweswashi ukwenza iminyango yokugezela yakho esobala. Ubuchwepheshe obuhle bengilazi bufakiwe emikhiqizweni yethu ukukusiza uguqule ukubukeka kwabo ngokufunwa. Noma ngabe ufuna ukuzifihla emehlweni prying noma wenze ukukhanya okuningi ungene, udinga kuphela ukucindezela le nkinobho. Ngengilazi yethu efudumele yokugeza izindonga neminyango, ubumfihlo bakho buvikelekile njalo! Ngabe ufuna ingilazi ukuthi uhlanganyele ...
Ingilazi Ecacile / Engaphansi Ye-Iron Yegumbi Lombhalo
Imininingwane eyisisekelo Ake sibhekane nayo, umnyango wokugeza akuyona nje umnyango wokugeza, uwukukhetha okune-stylistic okubeka ithoni ekubukeni nasekuzizweni kwendlu yakho yonke yokugezela. Yinto eyodwa enkulu kunazo zonke egumbini lokugezela lakho nento eheha ukunakwa kakhulu. Hhayi lokho kuphela, kodwa futhi kufanele kusebenze kahle futhi. (Sizokhuluma ngalokho ngomzuzwana.) Lapha e-Yongyu Glass, siyalwazi uhlobo lomthelela ongafakwa umnyango wokugeza noma wokufaka ishubhu. Siyazi futhi ukuthi ukukhetha isitayela esifanele, ukuthungwa, kanye ...
Ingilazi ehlakaniphile (Ingilazi ekhanyayo)
I-Smart ingilazi, ebizwa nangokuthi ingilazi elawula ukukhanya, ingilazi eshintshekayo noma ingilazi yobumfihlo, isiza ukuchaza izimboni zokwakha, zezimoto, ezingaphakathi nezomklamo womkhiqizo.
Ubukhulu: Nge-oda ngalinye
Izinhlobo Ezijwayelekile: Nge-oda ngalinye
Amagama agqamile: Nge-oda ngalinye
Isicelo: ukwahlukanisa, igumbi lokugezela, kuvulandi, amafasitela njll
Isikhathi sokulethwa: amasonto amabili
I-Smart ingilazi, ebizwa nangokuthi Ingilazi Yobumfihlo eguquguqukayo, iyisixazululo esinhlobonhlobo. Kunezinhlobo ezimbili zengilazi ehlakaniphile, enye ilawulwa ngogesi, enye ilawulwa yilanga.
Ingilazi yephrofayili ye-Basic Info U noma ebizwa ngengilazi yesiteshi i-U evela e-Austria. Iphinde ikhiqizwe ngaphezu kweminyaka engama-35 eJalimane. Njengolunye lwezinto ezisetshenziswayo ezisetshenziswa kumaphrojekthi wokwakha amakhulu, ingilazi yephrofayili ye-U isetshenziswa kabanzi eYurophu naseMelika. Isicelo sengilazi yephrofayili ye-U eChina sivela eminyakeni yama-1990s. Futhi manje izindawo eziningi eChina ziyisebenzisela umkhuba wayo wokuklama okusekwe emazweni jikelele. Ingilazi yephrofayili ye-U ingenye yezindlela zokuphonsa izingilazi. Kuyinqubekela phambili yokwakha ...
Isistimu Engaphansi Ye-Iron U Ye-Glass / U Channel Glass Power Generation System
Imininingwane Eyisisekelo Uhlu olusezingeni eliphansi lwensimbi ye-U iron ingilazi yokwakha ingilazi yezinto zokwakha ingilazi (i-UBIPV) ihlanganisa izinzuzo zengilazi yokwakha iphrofayili ye-U kanye nohlelo lwamandla elanga ukukhuthaza ukuvikelwa kwemvelo okuluhlaza nokusindisa okonga namandla okuphuma. I-UBIPV nedolobha kungahlanganiswa ngokuvumelanayo ukwenza i-Photovoltaic ibe yingxenye yempilo yomuntu. Akukona nje kuphela ukuthi kungokwokwakha, kepha futhi kungafinyelela ukonga amandla nezinjongo ezikhipha amandla, futhi futhi kungahlanganiswa ndawonye ne ...
Ama-Ice Rink Glass Systems
Ulwazi oluyisisekelo uYongyu Glass, oyilungu lomthengisi we-US Ice Rink Association, uthumele i-SGCC ukuthi i-1/2 kanye ne-5/8 yemikhiqizo eyenziwe ngengilazi embonini yeqhwa e-USA kusukela ngo-2009. imikhiqizo engilazi eshisayo kumakhasimende ethu futhi yabelane ngenzuzo evela kwezohwebo. Ezinye Izinzuzo Uhlelo olucashile lwe-ice rink ingilazi lusetshenziselwa kabi ukuvikela izilaleli ngemuva kwalo. Izinhlelo ze-ice rink ezifudumele zisebenza ngezinjongo eziningi, kufaka phakathi: 1) Ukuvikela ...
Izigaba zeNgilazi Yezokuphepha
Udonga oluyisisekelo Ukuphepha kwengilazi eyisihlukanisi senziwa ngengilazi eshisiwe / ingilazi enziwe ngamanoni / i-IGU, imvamisa yengilazi ingaba ngu 8mm, 10mm, 12mm, 15mm. Kunezinye izinhlobo eziningi zengilazi ezivame ukusetshenziswa njengokwahlukaniswa, ukufakwa kwesilazi esiqandisiwe, ukuphrinta kwesilika kwesilivere okuhlukanisayo ukwahlukanisa, ukwahlukanisa kwengilazi ye-gradient, ukwahlukanisa kwengilazi ye-lamised, ukwahlukanisa kwengilazi. Ukuhlukaniswa kwengilazi kusetshenziswa kakhulu ehhovisi, ekhaya nasentengisweni yokwakha.10mm ukuhlukaniswa kwengilazi okucacile okuhlanganisiwe kungama-5 times ...
Ulwazi oluyisisekelo I-Yongyu Glass iphendula izinselelo zabaklami banamuhla ezihlinzeka nge-JUMBO / OVER-SIZED monolithic tempered, lamised, insured ingilazi (dual & triple glazed) kanye ne-low-e camera ingilazi kufika kumamitha ayi-15 (ngokuya ngokwakhiwa kwengilazi). Ukuthi ngabe isidingo sakho senzelwe iphrojekthi ethile, ingilazi esebenza kahle noma ingilazi edlalwa ngobuningi, sinikezela ukulethwa komhlaba wonke ngamanani ancintisanayo. Ukucaciswa kwengilazi yokuphepha ye-Jumbo / Oversised 1) Ingilazi engenhla yefulethi yangaphakathi / iflat yeflat ezifakiwe ...
Umbono wethu ukwabelana ngezinzuzo eziqhathanisayo zomkhakha wezingilazi zokwakha waseChina namakhasimende, ukuhlinzeka amakhasimende ngezisombululo ezingabizi, kanye nokufinyelela ukubambisana kwe-win-win namakhasimende.
Iyunithi yokufakelwa kwengilazi efakwe kumamitha ayi-12
Ingilazi yephrofayili ye-pro yangaphandle yesimo somhlaba ...
Ucwaningo Case: Iphrofayili ye-U U yensimbi ephansi
I-SGP efudumele engilazi eyilisiwe, egobile ...
Isizinda Sokukhiqiza se-U profile-LABER U p ...
© I-copyright - 2010-2020: I-Yongyu Glass All All rights reserved.